Ireo zotram-piaramanidina eropeana dia miomana amin'ny vanim-potoana ririnina sarotra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Ireo zotram-piaramanidina eropeana dia miomana amin'ny vanim-potoana ririnina sarotra
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Mandritra ilay fomba nentim-paharazana fa ny offseason any Eropa, ny areti-mandringana dia mety hanasarotra ny fepetra fandidiana.
Mbola voafehin'ny vola miditra, manana ririnina henjana eo alohan'izy ireo.
Ny variana COVID-19 vaovao dia mety hampihena ny fahavononan'ireo mpandeha hisidina.
Hiakatra ny vidin'ny asa ary misy fanapahan-kevitra sarotra raisina.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eropeana dia kasaina hiatrika ririnina henjana noho ny areti-mandringana ary ny fahatokisan-tena dia mety ho voageja. Ny saran-dàlana ambany dia ho fanalahidin'ny fanentanana ny fangatahana satria mety hitohy ny fameperana ny dia.
Raha mbola voafehin'ny vola miditra dia hanana ririnina henjana eo alohany. Mandritra izay mahazatra ny offseason any Eoropa, ny areti-mandringana dia mety hanasarotra ny toe-draharaha.
Na dia nanomboka niverina aza ny fangatahana tamin'ity fahavaratra ity, dia mety ho tantara hafa ny ririnina. Mety hiakatra ny tranga COVID-19, ary mety hivoatra ny fiovana hafa, hampihena ny fahavononan'ireo mpandeha hisidina. Miaraka amin'ny governemanta marobe izay mamarana ny fanohanan'izy ireo, anisan'izany ny UK, hiakatra ny sandan'ny mpiasa tsy azo ihodivirana ary fanapahan-kevitra sarotra ara-bola no tsy maintsy raisina. Ny fifandanjana marefo dia tsy maintsy atao eo amin'ny toerana itodiana maro sy ny fifehezana ny vidin'ny asa. Tsy maintsy mailaka ny seranam-piaramanidina mba hiantohana ny fahavelomana.
Ireo mpandeha dia mety manohy manemotra ny drafitry ny dia amin'ity ririnina ity noho ny fisalasalana lehibe. Na dia mandroso tsara aza ny vaksinin'ny vaksinin'i Eoropa, ny ahiahy an'ny Delta dia ahiana. Miaraka amin'ny firenena sasany sahirana mitazona ny viriosy, dia toa mijanona ny fameperana ny dia. Ny fitsangatsanganana dia hitohy ho sarotra kokoa amin'ny alàlan'ny fameperana tsy tapaka miovaova toy ny fepetra takiana amin'ny fitsapana COVID-19 ratsy hidirana amin'ny faritany maro. Ankoatr'izay, fitsangatsanganana fitsangatsanganana no mpisakana faharoa lehibe indrindra amin'ny dia, miaraka amin'ny 55% amin'ireo mpamaly ao amin'ny biraom-pifidianana farany izay milaza izany antony tsy hivezivezena izany. Ny tambajotram-pifamoivoizana dia tsy maintsy mifantoka amin'ny toeran-kaleha voafetra fameperana ary ny fomba mailaka / mamaly dia tsy maintsy atao.
Ny fifaninanana eo amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka any Eropa dia talohan'ny COVID ary matetika ny vidin-javatra no mamaritra ny mpandeha rehefa misafidy kaompaniam-pitaterana sidina. Miaraka amin'ny tsy fahazoana antoka amin'ny fangatahana amin'ity ririnina ity, tanjona lehibe ny famporisihana ny famandrihana.
Ny fampihenana ny saran-dàlana hanentanana ny fangatahana dia tetika haparitaka amin'ity ririnina ity hamenoana seza. Izany dia mety hisarika ny 57% amin'ireo valinteny Eoropeana izay nanisa ny vidiny ho singa lehibe indrindra rehefa mifidy marika fiaramanidina, araka ny fanadihadiana natao vao haingana. Ny vidiny dia ho zava-dehibe amin'ny famporisihana ny fivezivezena amin'ny sidina vonjimaika sy ny seranam-piaramanidina mora vidy dia mety ho ny kaompaniam-pitaterana lohataona amin'ity ririnina ity. Miaraka amin'ny mpandeha manohy mivezivezy akaiky kokoa ny trano, ny tambajotra eropeana mivelatra an'ireto mpitatitra ireto dia tokony hiasa amin'ny tombotsoany.
Oktobra 21, 2021 ao amin'ny 01: 31